Jadwalka: Isdhexgalka Ballanta SaaS | Martech Zone
Jadwalka: Isdhexgalka Ballanta SaaS
Arbacada, Nofeembar 30, 2011 Khamiista, Diseembar 1, 2011 Douglas Karr
Hadaadan maqal Jadwalka, waad sameyn doontaa .. ama waad adeegsan doontaa dhowaan! Horeba ilaa 15,000 isticmaale, Schedulicity waxay bixisaa ganacsi kasta oo dejiya ballamo si fudud loogu daro internetka, facebook iyo moobiilka jadwal iskiis ah ganacsigooda. Nidaamku waa mid aad u macquul ah… $ 19 bishiiba hal isticmaale ama $ 34 bishiiba isticmaaleyaal badan. Shirkadda waxaa la furay sanad iyo badh ka hor waxayna leedahay qaabab adag oo dhammaystiran oo diiradda saaraya ganacsiga yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah.
Schedulicity waxay awood u siineysaa ballan u sameynta shirkadaha in ka badan 45 cirif, wax walba laga bilaabo socodka eeyga, tuubbooleyaasha, farsamayaqaannada musmaarrada iyo timo qurxinta. Caannimada adeegga ayaa iska hadlaysa, iyadoo in ka badan 60% macaamiisha cusub ay iska diiwaangelinayaan gudbinta iyo in ka badan 500 oo macmiil cusub ah oo lagu daro usbuucii. Adeeggu wuxuu leeyahay heer yaab leh oo ah 99% heerka haynta!
Ballanta internetka ballansashada.
U oggolow taageerayaasha inay ballamaha si toos ah uga ballansadaan adiga Facebook page.
Dhameystiran interface mobile waxay kuu ogolaaneysaa macaamiishaadu inay ballan kula qabsadaan wakhti kasta, meel kasta.
Fasallo, aqoon isweydaarsiyo ama dhacdooyin kooxeed waa lagaa taageerayaa, kuu ogolaanaya inaad maamusho oo aad buuxiso fasaladaada.
Waxay bixisaa barxad ay kula xiriiraan macaamiishaada qaaska iyo dallacsiinta oo leh in kabadan 75 midabbo leh, qaabab u gaar ah. Tan waxaa ka mid ah awoodda lagu daro farriimaha cabsida leh ee xusuusinta ballanta!
Jadwalka ayaa leh adeegga macaamiisha, casharro iyo qalab waxtar leh oo ay weheliso bulsho aad u tiro badan oo isticmaaleyaal ah oo wadaagi kara talooyinka guuleysta.
Schedulicity uma baahna wax softiweer ah oo lagu rakibay goobta macmiilka, kaliya labo tags oo qoraal ah oo keenaya isdhexgalka… si ay ula falgalaan websaydhkaaga hadda daqiiqado gudahood. Sidoo kale, waxay leeyihiin Facebook-dhexgalka si kuwa raacsan ay u riixi karaan jadwalkaaga isla markaana ay si deg deg ah ballan uga qabsadaan Facebook:
Jadwalku kaliya maahan jadwalka jadwalka, dhab ahaantii wuxuu kaa caawinayaa inaad ula dhaqanto ballamaha furan sida haddii ay ahayd tiro koob. Ganacsiyada waxaa la siiyaa aaladaha suuqgeynta si ay uga caawiyaan inay buuxiyaan jadwalkooda, iyagoo adeegsanaya astaamaha dalabyada soo baxa:
Xayeysiinta heshiiska ayaa sidoo kale lagu dhex daray xalka.
Tani waa tusaale weyn oo ah ballanqaadkii Software sida Xalka ah. Adoo siinaya waxyaabo adag oo xoog leh, Schedulicity waxay awood u leedahay inay siiso alaab adag oo jaban milkiilayaasha ganacsiga. Schedulicity sidoo kale waxay bilaabeysaa barnaamij gudbin macaamiil cusub. Isku qor koontada tijaabada ee bilaashka ah Jadwalka.
Tags: ballancodsiga ballantajadwalka khadka tooska ahjadwalka internetkais bedelid